खुशीको खबर ! रोल्पामा सुनखानी रहेको पुष्टि, छिट्टै उत्खनन गरिने – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/खुशीको खबर ! रोल्पामा सुनखानी रहेको पुष्टि, छिट्टै उत्खनन गरिने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतमा ज’नयुद्धको केन्द्रका रुपमा रहेको रोल्पालाई अब विकासको केन्द्र बनाउने कामको था’लनी भएको जनाएका छन् । रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा बुधबार लगानी स’म्मेलनको उ’दघाटन गर्दै मन्त्री पुनले ज’नयुद्धको केन्द्र र परिवर्तनको प्र’तीकका रुपमा रहेको रोल्पा अब विकास, समृद्धि तथा लगानीमैत्री जिल्ला हुने घो’षणा गरे । रोल्पा लगानीका लागि उर्बर क्षेत्र रहेको उनको भनाइ थियो । विभिन्न अध्यननले रोल्पामा सुनखानी रहेको पुष्टि भइसकेकाले अब त्यसको उत्खनन् गरेर जिल्ला र मुलुककै स’मृद्धिका लागि लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । रोल्पा जलविद्युत, कृषि, पशुपालन, खानी तथा खनिज र पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रो स’म्भावना भएको जिल्ला भएकाले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री पुनले अ’पिल गरेका छन् । नेपाल जलविद्युतमा आ’त्मनिर्भर मात्र नभएर अब नि’र्यात गरी आर्थिक आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले लिएको स’मृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना सकाकार पार्न लगानी क्षेत्रको प’हिचान गरी सरकारको नी’ति तथा यो’जनालाई सफल बनाउनुपर्ने जनाएका छन् । नेपालका हरेक नागरिकलाई स’बल बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका ल’गानीकर्ताबीच सहकार्यमा उनको जोड थियो । रोल्पा नगरपालिकाको आ’योजना तथा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा र उद्योग वाणिज्य सं’घको समन्वयमा सुरु ल’गानी सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ ।